Nepalistudio » रानीपोखरी मन्दिर पनि मल्लकालीन ‘ग्रन्थकुट’ शैलीमै किन नबनाउने? रानीपोखरी मन्दिर पनि मल्लकालीन ‘ग्रन्थकुट’ शैलीमै किन नबनाउने? – Nepalistudio
रानीपोखरी त पिँधमा एक तह कालो माटो भरेर मल्लकालीन शैलीमै बन्ने भयो। अब प्रश्न उठ्छ, पोखरी बीचको मन्दिर पनि मल्लकालको वास्तविक स्वरुपमै किन नबनाउने?
राजा प्रताप मल्लको पालामा बनेको रानीपोखरीको वास्तविक स्वरुप
पर्सियाका राजकुमार वाल्डेमर सन् १८४४ देखि १८४६ सम्म श्रीलंका, भारत र नेपाल भ्रमणमा निस्केका थिए। त्यसैबीच १८४५ फेब्रुअरी ५ देखि मार्च मध्यसम्म उनले काठमाडौं उपत्यका र नुवाकोट भ्रमण गरे। उनको भ्रमण डायरीमा नेपालको अध्याय पनि छ, जसमा रानीपोखरीको तत्कालीन चित्र संकलित छ। चित्रमा ‘रानी के ताल’ भनिएको छ।
रानीपोखरीमा भेटिएको गजुरको एउटा हिस्सा। तस्बिरः सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
तत्काललाई मन्दिर पुनर्निर्माण रोक्ने निर्णय गरिएको तिवारीले बताए।
जीर्णोद्वार भइरहेको रानीपोखरी मन्दिर। यो मल्लकालीन वास्तविक स्वरुप होइन। तस्बिरः सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी